Builk X SHERA For Mandalay Constuction မန္တလေး ဆောက်လုပ်ရေး - BUILK Myanmar
December 2, 2017 ทั้งวัน
မန္တလေး ဆောက်လုပ်ရေး လောက အတွက် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် GOBUILK Event ကို SHERA ရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှူနဲ့အတူ
Hotel Mandalay မျာ Dec 2nd 2017 ရက်နေ့ မှာ ကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
Opening Remark by SHERA
အခမ်းအနားကိုတော့ Builk Myanmar မှ ကို ပြည့်ဖြိုးအောင် နှင့် SHERA မှ Mr.Khed တို့ မှ စတင်အဖွင့် စကားပြောကြားပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့ နောက် ကိုပြည့်ဖြိုးအောင် မှ ဆက်လက်ပြီး Why Builk ? ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Builk Software အကြောင်းကို ရှင်းပြ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မန္တလေး ဆောက်လုပ်ရေး ကန်ထရိုက်တာ တစ်ဦး
GOBuilk Workshop အစီအစဉ်
Builk Software အကြောင်းရှင်းပြ အပြီးမှာတော့ Workshop အစီအစဉ်ကို စတင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Workshop အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကိုတော့ နေ့လည် ၁၂ နာရီအတိမှာ ရပ်နားခဲ့ပြီး Lunch Time ပေးခဲ့ပါတယ်။
SHERA Product Knowledge Sharing
Lunch Time အပြီးမှာ SHERA မှ Sale & Marketing Executive ကို ကျော်ရဲအောင် မှ SHERA Product Knowledge များ Sharing လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် GOBUILK Event ဒုတိယပိုင်းမှာ အထူးဧည့်သည်တော် နှစ်ဦးမှ ကိုပြည့်ဖြိုးအောင် @ Thomas နဲ့အတူ What it should take to digitize your business ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Panel Discussion Session မှာ ၀င်ရောက် ဆွေးနွေး ပေးခဲ့ပါတယ်။ Special Guest Speaker နှစ်ဦးက တော့ imyanmar website များရဲ့ founder တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုနေမင်းသူ နဲ့
Baganmart ရဲ့ founder ဖြစ်တဲ့ ကိုပြည့်ဖြိုးပိုင် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Builk X SHERA
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Tech Leader နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုနေမင်းသူ (imyanmar) နှင့် ကိုပြည့်ဖြိုးပိုင်(Bagan Hub) တို့မှ ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်န်ှင့်အတူ What should it takes to digitze your business ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Panel အစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။
GOBUILK Event ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှူ အမြင့်ဆုံးအပိုင်း တစ်ခုလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့ နောက် Workshop အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ညနေ ၄နာရီမှာ အခမ်းအနားကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
ယခုEvent မှာ Builk Myanmar အနေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ပေမယ့် လဲ လက်ခံပေးခဲ့တဲ့ SHERA မှ လူကြီးမင်းများ နဲ့Event ကို လာရောက်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးမှ ကန်ထရိုက်တာများကို Builk Myanmar မှ လှိူက်လှိူက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
အလုပ်များတဲ့ကြားမှ လာရောက်ကူညီပေးကြတဲ့ ကိုနေမင်းသူ နဲ့ကိုပြည့်ဖြိုးပိုင် တို့ ကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ယခုEvent ရဲ့ အမှားတွေကို Builk Myanmar အနေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီး တော့ ……
ပိုကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ နဲ့ကန်ထရိုက်တာများ ဆီကို ထပ်မံ အရောက်လာခဲ့ပါဦးမယ်။
☑️Why’s Builk? presentation
☑️SHERA Products knowledge sharing
☑️What it takes to Digitize panel
Thanks for your interesting in freemium software workshop, we will announce another event for you soon.